Te handoro ny tavy haingana be, araho ity “regime” ity
LUCIE : Tambanivohitra, napetaka tamin’ny vola 500fmg ny sariny ! Tantara nahavariana no entina aminao anio, asaintsika i Bebe Lucie hitantara ny zavatra niainany.
Jejoo : Iza moa ianao ? Razafimalala Lucie no anarako. Eny Anjomakely aho no mipetraka ary efa 77 taona taona izao. Vao teraka 30mn aho dia namoy ny ainy ny reniko, ka olona foana no nitaiza ahy hatramin’izay.
Artisao, ravin’oliva,…mampidina tosi-dra
Mety hitarika fahatapahan’ny lalan-drà, olana eny anivon’ny voa sy ny maro hafa, ny fiakaran’ny tosi-drà. Ankoatra ny fizahana tokony hatao any amin’ny dokotera dia fomba hisorohana azy ireto torohevitra omena anao ireto.
Lalao : Nijangajanga ka narary mafy…mitantara
Renim-pianakaviana iray, tratran’ny aretina fiandry. Mitantara ny fijaliany nandritra ny volana maro naterak’izany aretina izany, efa nihevitra mihitsy aza izy fa ireo aretina tsy ahitam-panafana no nanjo azy.
Ranona paoma sy tantely, mitroka tavy!
Mbola misy paoma ihany eny an-tsena amin’izao na dia efa faramparan’ny vanim-potoana hisiany aza izao.
Ankatso : Tsy mpamosavy fa voan’ny «alzheimer »
Niparitaka manerana ny tambajotran-tsosialy vao maraina omaly ny sarin’ny renim-pianakaviana iray, izay voalaza fa mpamosavy ary hita teny Ankatso.
Misara-panambadiana, tena vahaolana ve?
Tso-dranon’ny Malagasy rehefa misy manorin-tokantrano ny hoe : « lamban’akoho ka faty no hisarahana ». Tsy azo heverina rahateo koa ny hoe :
“Regime” mampihena haingana be saingy somary sarotsarotra arahina ity entina aminao ity. Mety ho an’ny olona mila mihena haingana izy ity. Mila miomana ara-tsainia kosa anefa.
Mila ny torohevitry ny matihanina
Ferana be ny sakafo mitondra hery ao anatin’ity regime ity, mba ho amin’izay tahirin-kery efa ao anaty ao no hangalan’ny vatana izay hery entiny miasa. Fady araka izany ny sakafo misy siramamy mora levona sy ny sakafo be menaka. Fady koa ny mitsakotsako sy ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola na zava-pisotro mamy. Voafetra ho 800 kaloria ihany ny sakafo azo hohanina isan’andro. Tokony haka ny hevitry ny mpitsabo mialoha ny hanarahana azy satria hentitra ny “regime” atao. Izy no hanoro ny amin’ny fe-potoana hahafahana manaraka ity “regime” ity.
Atao sakafo miovaova
Mba tsy hahatsapana loatra hoe hentitra izy ity dia tokony hiovaova foana ny karazan-tsakafo hohanina fa manaja ny isan’ny kaloria azo hohanina fotsiny. Mba ho azo antoka koa fa tsy mihinana sakafo be kaloria, dia aleo tsy mihinana sakafo voahodina ozinina mihitsy. Tanjona ny hahafeno ny filan’ny vatana lipida, gliosida (ela vao levona) ary proteina.
Ireo sakafo azo hohanina
Mahazo mihinana hena natono nasiana episy na zava-maitso manitra. Tsara homena vahana ny trondro ka tokony mihinana izany in-droa na in-telo isa-kerinandro. Tokony mihinana atody koa fa ny tapotsiny no tena azo hohanina raha tokony ho ferana ihany ny fihinana ny tamenany noho izy be kolesteroly. Tsy voafetra ny fahafahana mihinana legioma sy voankazo. Anisan’ny tokony omena vahana ny laisoa, ny baranjely, ny korzety, ny salady ary ny brocoli …Mahazo mihinana yaourt sy fraomazy saingy ireo karazana tsy matavy ihany. Tsy mety ao anatin’ity regime ity noho izany ny fihinanana yaourt « double crème ».
Satria kelikely ihany ny sakafo hohanina ao anatin’izao regime izao dia mila mifantoka tsara isaky ny misakafo. Tsakoina miadana tsara ny sakafo miditra ny vava. Raha tsy izany mantsy dia ho mora noana ka ho voasarika hitsakotsako.
Maro ihany ny tombony azo avy amin’ity regime ity :
§ Haingana be ny fihenana.
§ Mahasalama ny sakafo satria miovaova foana sady voalanjalanja. Tsy tafiditra ao anatin’ity regime ity ny menaka sy ny siramamy.
§ Maro ihany ny sakafo azo hohanina
Misy lesoka ihany ity regime ity anefa :
§ Mety hiverina daholo ny lanja very raha vao tsy mitandrina raha vao vita ny regime. Tsy mahazo miverina misakafo tampoka toy ny taloha fa tsy maintsy ampidirina tsikelikely indray ireo sakafo tsy nohanina nandritra ny regime.
§ Sarotra arahina ihany ity regime ity satria hentitra be ka mila fikirizana sy fiharetana be.
§ Raha vao tsy nanatona matihanina mialoha ny hanarahana azy dia mety ho voan’ny tsy fahampiana otrikaina izay mety hitarika olana ara-pahasalamana.
§ Mety hahatsiaro noana matetika mandritra ny regime raha tsy mahay mamono izay fahatsapana hanoanana izay. Azo atao tsara ny fanaovana fampihetseham-batana maivana amin’izany ohatra.
§ Mety hahatsiaro ho vizana noho ny fiovana tampoka entin’ilay regime.
Ohatra sakafo 1 andro
· Sakafo maraina : kafe na dite tsy mamy sy biskaoty 2
· Sakafo atoandro : steak vita amin’ny soja sy potsitr’ovy nasiana cumin sy yaourt tsy mamy ½. Paoma tsy mamy nandrahoina 75g sy fromage blanc 75g.
· Sakafo hariva : lasopy legioma 1 lovia jobo, atody nandrahoina aman-korany 1 (tsy atao masaka loatra ny tamenany) paoma nandrahoina 50g, yaourt tsy mamy 1.
Afaka mihinana mofo dipaina 35 grama isaky ny sakafo.